Metaverse စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင် ရန် ဘူတာရုံ B က စမ်းသပ်မှု "UPowerChain" - Pandaily
တနလၤာေန႔က သတင္းတပုဒ္ အရTechPlanetတရုတ် ဗီဒီယို streaming platform B သည်၎င်း၏ “ UPowerChain” ကို ကုမ္ပဏီ၏ Metaverse လုပ်ငန်း နှင့်ဆက်စပ် နေသည်။ ဘူတာ B နှင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် သူတစ် ဦး က UPowerchain သည် အက် ပလီကေးရှင်း အသစ် များ၊ ယဉ်ကျေးမှု အသစ် များ၊ ဂိမ်း အသစ် များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု အသစ် များအတွက် ဖန်တီး ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဇာတိ အသိုင်းအဝိုင်း ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် ရပ်ရွာ အုပ်ချုပ် မှုကိုလည်း အထောက်အကူပြု လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
UPowerChain သည် ပွင့်လင်း ဆန်းသစ် ။ အားလုံးပါ ၀ င်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဇာတိ အသိုင်းအဝိုင်း ကိုဖန်တီး ရန်ရည်ရွယ် သည့် “ Metaverse Ecology” ဖြစ်သည်။ Blockchain သည် Metaverse တည်ဆောက် ရန်လိုအပ်သော အခြေခံ နည်းပညာဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် UPowerchain သည် လာမည့် မျိုးဆက်သစ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကမ္ဘာ “ Metaverse” တွင်လည်း အသုံးပြု လိမ့် မည်ကို သတိပြု သင့်သည်။ ဘူတာ B ရှိ Metaverse သည် အများပြည်သူ အတွက် မကြာမီ ဖွင့်လှစ် တော့ မည်ဖြစ်သည်။
လောလောဆယ် UPowerchain ၏ ရူပါရုံ ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု မြေပုံ token များအတွက် ရုပ်သံလိုင်း ပေး, ဒီ ဂေဟ ဗေဒ join ဖို့ အမျိုးမျိုးသော applications များ ဖိတ်ခေါ်, အပလီကေးရှင်း ကိုဖြတ် ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်း နားလည်သဘောပေါက် ခြင်း, အသုံးပြု သူများကို ကွဲပြားခြားနားသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေ များနှင့် display ကို အဆင့် ဆင့် ပေး, အဖွဲ့အစည်း များသို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း အတွက် “ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား စစ်မှန် ကြောင်း အထောက်အထား ပြသ ခြင်း + ပိုင်ဆိုင်မှု repository ကို” ဖြစ်လာ ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Metaverse တွင် ဘူတာ B သည်၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် ရှိသည်။ “ Metaverse နှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိ ဆွေးနွေးမှု နီးပါး မီဒီယာ နှင့် မြို့တော် အဆင့် ဆင့် မှာ ဖြစ်ပါသည်, နှင့် ထုတ်ကုန် လုပ် သူ မရှိ သလောက် Metaverse အကြောင်း ပြောဆို. ဒါဟာ Metaverse အကောင်အထည်ဖော် ထုတ်ကုန် နှင့် နည်းပညာ အတွက် လုံလောက်သော အောင်မြင် မှုရှိ ရမည် ဖြစ်သောကြောင့်, မ ဝေး တော့ တဲ့ အနာဂတ် မှာ အောင်မြင် နိုင် ပါဘူး. ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင်, ဒီ အကောင်အထည်ဖော်မှု အမှန် ပင် အသုံးပြု သူများကို ပို ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံ နှင့် ပို ကောင်းတဲ့ ရူပါရုံ ကို ဆောင်ကြဉ်း ပေး နိုင်ပါတယ်, ဒါ ပေမယ့်လည်း နောက်ထပ် option ကို ရှိပါတယ်” ဟု Chen Rui, ဘူတာရုံ B ၏ စီအီးအို ကဆိုသည်။
B-station ၏ Metaverse သည် blockchain နည်းပညာ ကိုအခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ blockchain သည် ဝိသေသလက္ခဏာ စစ်မှန် ကြောင်း အထောက်အထား ပြသ ခြင်း ယန္တရား၊ စီးပွားရေး စနစ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဖန်တီး သူ တန်ဖိုး အာမခံချက် တို့တွင် အရေးပါသော အထောက်အကူပြု အခန်းကဏ္ plays မှ ပါဝင်သော အရေးကြီးသော အခြေခံ နည်းပညာဖြစ်သည်။ Station B သည် Metaverse ၏အဓိက အစိတ်အပိုင်းများကို အပြီးသတ် နိုင်ရန် blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြု လိုသည်။
“ ငါ Metaverse အယူအဆ အတွက် အရေးကြီးဆုံး အရာ တစ်ခုတည်း ကုမ္ပဏီ အတွက် လုပ် လို့ မရတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခု ဂေဟစနစ် ထောက်ပံ့ရေး Self-ပြန်လည်အသုံးပြု ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ထင်, ပြီးနောက် ရှိသမျှ တို့, အသစ် Metaverse ကမ္ဘာ တည်ဆောက်ရန်, ဖန်တီး သူ တွေအများကြီး ရှိ ရမည်, သူ တို့ကလည်း အထဲမှာ ငွ ေရှာ ဖို့လိုအပ် ပါတယ်, ဤ B ကို ဘူတာရုံ ဂေဟ ဗေဒ အစဉ်အမြဲ လိုက်နာ သော အတိအကျ အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ Virtual uploader သည် ဥပမာ ကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ motion capture မှတဆင့် uploader သည်အခြား ပုံရိပ် တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး နောက်လိုက် များ စွ ာက ကြိုဆို ကြသည် “ ဟု Chen Rui ကပြောကြားခဲ့သည်။